Home /Blog/Wax ka ogow Heshiiska Dawladda Puntland iyo Shirkadda P&O/Dubai Ports World
News,Somali News |
Sida aanu ku xusany warqaddii labaad ee aanu u dirnay Shirkadda P&O Ports oo jawaab u ahayd mid iyaga nooga timid, dhulka ay labada dhinac oo heshiiska galay ku heshiiyeen in mashruuca 2da heer ah laga laga fulinayo ma aha dhul bannaan oo aan cidna degganayn oo aanay jirin haba yaraatee cid laga rarayaa. Koobbi warqadaas ayaa halkan ku lifaaqan
(HALKAN RIIX=CLICK HERE) Bosaso Elders response final
Dawladda Puntland in Shirkadda P&O ay ku yiraahdeen ma jirto cid laga rarayaa goobta laga dhisidoono mashruuca waxa ay ku caddahay warqadda ay noo soo qoreen. Taasina waxa ay markhaanti ka tahay tayada liidata ee Maamulka uu madaxda ka yahay Dr. Abdiweli Gas iyo Baarlamaan ku sheegga oo lacag ka qaatay una ansixiyey iyagoo aan eegin waxa meesha ku qoran.
Waxaa is waydiin leh xagee kaga qoran tahay dastuurka Puntland in Dawladdu ay dad guryohood iyo dhulka ay degganaayeen qarniyaal intay lacag kaga soo qaadato s markaasna ay qandaraas ku siiso shariikad si gaar ah loo leeyahay dadka intooda badni rumaysan yihiin in saami wayn uu ku leeyahay Madax-weyne Gaas, Hawsha Burburinta degaanku waa bilaabatay iyadoo ugu horayn laga bilaabay dhismayaasha ay dawladdu gacanta ku hayso.
Waxaa taasi ka sii daran in aanay mashruuca Dawlad-ku-sheegga Puntland ay xog been ah kula galeen heshiis Sharikadda P&O ee laga leeyahay Dubai marka ay gudbiyeen in goobta laga fulin doono Mashruuca Dekedda Bosaso ay tahay goob cidla ah oo cidna degganayn sidaasi darteedna aan cidna laga barakicinayn. Taasi waa been caddaan ah, waxaase iswaydiin leh iyada oo aynu wada ogsoon nahay in goobtu tahay meeshii magaaladu ka bilaabatay, ma dici kartaa haddiiba ka jirto bogcad bannaan in aanay ahayn meel mulkiilayaal leeyihiin.
Waxay nala tahay in qof kasta oo reer Puntland ah oo fahamsan qiimaha dhaxalka iyo taariikhdu ay leedahay oo ey wajib tahay inlaga hortigo tirtiridda taariikhda soo jireenka iyo baabiinta hantida gaarka ah xeebta Bosaso iyadoo la adeegsanayo cagaf-cagafyo iyagoo aan waxba lays weydiin. Bulshada`dan uma aha iney ogolato dulmi, musuq iyo ajendooyin guracan.
Qof kasta oo reer Puntland ah, inuu naftiisa been u sheegayo ama in aanu xogba u ahayn heshiis kan, waxaa uu si cad u ogyahay in Mashruucan aanu ahayn mid waafaqsan sharciga maadaama lagu saleeyey been laguna ansixiyey laaluush lagu iibsaday Xubnaha Baarlamaanka oo in ay gutaan xilkooda bal iskaba daaye si aan gabasho lahayn oo aan laga qarinayn shcabka uu iibsaday maslaxadda iyo Danta Puntland.
Waxayse ilaaween in dalka dadka ay quursanayaan oo ay u haystaan in ay yihiin dad indha xiran aan la marsiin karayn waxa dan uu ahayn dalka iyo dadkaba.
Mudane Khadar Abdi Xaaji Mire
Guddoomiyaha Guddiga Odayaasha
Iyo Indheer-garadka Bosaso